छायाँलाई लखेटेर कहिल्यै भेटिन्छ र ? - Nepali Christians Site
छायाँलाई लखेटेर कहिल्यै भेटिन्छ र ?
Posted by Jagadish Pokharel on January 31, 2013 at 7:19am
किन लड्ने किन भिड्ने भाईभाई हामी; एकजनाले अर्कोलाई महाशत्रु ठानी । छायाँलाई लखेटेर कहिल्यै भेटिन्छ र ? केहि छैन पाउनु देशलाई भंगालोमा तानी ।
धेरैवटा आन्दोलन भए यो देशमा, हजारौंले ज्यान गुमाए; खरबौंको सम्पतिको नोक्सानी भयो आन्दोलनको नाममा; तर केहि हात लागेन । त्यसकारण हे यो देशमा केहि गरौंला भनेर सडक ततांउदै हिडेका मित्रहरु जे तपाईंहरुले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिं केवल छाँयालाइ खेदेर भेट्न खोजेको जस्तो मात्रै हो । येशू ख्रीष्ट जो शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ उहाँबिना शान्तिको कल्पना पनि नगरे हुन्छ यो दुनिंयाले ।
घाममा सुकाइएको अंगार चुसेर तिर्खा मेटीदैन; आँखामा कालो पट्टी बाँधेर बाटो भेटिदैन । प्यास लाग्दा मरुभूमि होइन खोला धाउनुपर्छ; साँचो शान्ति पाउनलाई साथि ख्रीष्टमा आउनुपर्छ । त्यसकारण बाटो देख्ने हो भने आँखाको पट्टि खोल्नुस अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुहुने जीवनको त्यो पानी पिउनुहोस्, फेरी कहिल्यै प्यास नलाग्ने गरि । पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा येशूले यसरी भन्नुभएको छ," तर जस-जसले मैले दिने पानी पिंउछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउनेछैन । जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु, त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ । :- यूहन्ना ४:१४ Views: 190
Tags: कहिल्यै, छायाँलाई, भेटिन्छ, लखेटेर Like 8 members like this
Comment by Anjan Sethi on February 18, 2013 at 2:56pm amen amen amen Comment by Tenjing Sherpa on February 16, 2013 at 11:44am amen
Comment by krish moktan on February 11, 2013 at 5:17pm Amen Comment by Amar Tamang on February 9, 2013 at 10:09am अमेन